रुपान्तरण र वामपन्थीको घोषणापत्र - विचार/विश्‍लेषण - कान्तिपुर समाचार
- डा. रेणु अधिकारी
लिंगीय विभेद अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता बारम्बार दोहोर्‍याउने पार्टीहरूको घोषणापत्रले महिलालाई हिंसापीडित र उद्धारको विषय–वस्तुभन्दा बाहिर गएर हेर्न सकेको छैन ।
कार्तिक २७, २०७४-यो वर्षको सुरुदेखि नै देश चुनावमय छ । शासकीय संरचना परिवर्तन गर्ने, गणतन्त्र व्यवहारमा कस्तो हुन्छ भन्ने अनुभूत गराउन सक्ने शक्ति यो वर्षका निर्वाचनहरूले बोकेका छन् । त्यसैले अहिलेको निर्वाचनमा कस्तो सिद्धान्त बोकेको पार्टी र त्यसभित्र कस्ता चरित्र बोकेका मानिस छन् भन्नेमा जनता सचेत हुन आवश्यक छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सही व्यक्तिको छनोटले मात्रै पुग्दैन, पार्टी पनि सही हुनुपर्छ । लामो समयको संक्रमणको सायद अन्त्यतर्फ देश अगाडि बढिरहेको छ । त्यसैले देशलाई अहिले रूपान्तरण गर्नसक्ने नेता आवश्यक छ । रूपान्तरणमुखी नेतृत्वले बाहिरी जगतका लागिमात्रै नभई आफूभित्र, आफ्नो पार्टीभित्र र आफ्नो देशभित्र आधारभूत परिवर्तन गर्नका लागि अरुलाई बाटो देखाउन, निर्देशित गर्न एवं प्रभाव पार्न सक्छ । त्यसैले अहिले निर्वाचनमा आउने नेतृत्व छनोट गर्दा ‘यस्ता नेता कहाँ छन् र ?’ भन्ने खोज्नुका साथै उनले पूर्णरूपले सरकार बनाउन सकुन् भन्ने जनताले हेक्का राखेमात्रै स्थिर सरकार बन्न सक्छ । देशमा सकारात्मक रूपान्तरण हुनसक्ने आधार बन्छ ।
›डा. रेणु अधिकारी
मतदाता सजक हुन आवश्यक ›